Umahluko phakathi kwamandla ombane kunye namandla amaza | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Umahluko phakathi kwamandla ombane kunye namandla amaza
UDaniel Palomino | | Amandla olwandle, Amandla eNtshukumo
Omabini la mandla avela elwandle, kodwa uyazi ukuba avela phi amandla amaza kunye namandla amaza?
Inyaniso ilula kakhulu ukwazi ukuba yintoni amandla kwaye ligama elinika imikhondo emininzi, umzekelo Amaza olwandle, avela kulwandle namaza, sele inzima ngakumbi, iyeza wave.
Ngokufutshane kunye nolwazi olusisiseko ekufuneka ulugcinile kukuba Amandla olwandle njengoko besitshilo ukuba ivela kumaza, intshukumo ebandakanya ukunyuka komgangatho wolwandle kwaye iveliswe kabini ngemini ngumtsalane weNyanga.
Ukusetyenziswa kolu hlobo lwamandla kakhulu kufana ne-hydropower (Siza kuthetha ngayo kwikamva). Nje ukuba sibe nedama elibekwe echwebeni (umlomo welo chweba wenziwa yingalo enye ebanzi emise okwifelen evulekileyo) enamasango kunye nee-hydraulic turbines ezifakiweyo, sinika ukubaluleka kubude obunokufikelela kumaza.
Oko kukuthi, xa umjelo omkhulu sele uza kufikelelwa (ulwandle luyenyuka), amasango avulwa ngokuguqula oomatshini bomoya ngamanzi angena echwebeni emva koko aqokelele umthwalo wamanzi owaneleyo kwaye bakwazi ukuvala amasango ukuthintela amanzi ukusuka ekubuyeni elwandle.
Nje ukuba umsinga ophantsi ufike (umsinga ophantsi), amanzi ayakhutshwa ngee-injini zomoya.
Oku kushukuma kwamanzi kwenza oomatshini bomoya ukuba bajikeleze inkqubo yokungena nokushiya amanzi kwaye yile nto ivelisa le mveliso yamandla ombane.
Kumandla olwandle sinokufumana zombini izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga.
Ngaphakathi kwezibonelelo kunokuthiwa ngamandla ahlaziyekayo kwaye ingamandla aqhelekileyo, kuba kuhlala kukho oko kuhamba kwamaza nokuba ungakanani unyaka.
Nangona kunjalo, iingxaki zininzi, njengokuba inemveliso yamandla ethutyana, kuya kufuneka ulinde kwangoko nasemva kwemini ukuyivelisa, ubungakanani kunye neendleko zoncedo lwakho, njl.
Kwelinye icala sine amandla amaza, ayikho enye into ngaphandle kwamandla amaza njengoko benditshilo ngaphambili kwaye yiyo loo nto Amaza olwandle aqukethe isixa esikhulu samandla ivela kwimimoya, ukuze umphezulu wolwandle ubonwe njengomqokeleli wokuntywila wamandla omoya.
Enye yeentlobo zamandla ahlaziyekayo afundwe kakhulu namhlanje kwaye kukho izixhobo ezininzi ezinje nge Umqolomba kaCockerell kunye nedada likaSalter ukuguqula intshukumo yamaza ibe ngumbane
Idada leSalter ludada ngokumila kwedada (yiyo loo nto igama lalo) apho elona candelo lincinci lichasayo amaza ukuze akwazi ukuhambisa intshukumo yawo kangangoko. Ezi zidadayo ziyajikeleza phantsi kwentshukumo yamaza ajikeleze i-axis ebonelela ngokujikeleza okujikeleze i-axis yayo, ukulawula ukwenza impompo yeoyile, ephethe ukuhambisa i-injini yomoya.
Ngokuchasene noko, isihlenga seCockerrel siqulathe amaqonga achaziweyo alungele ukufumana impembelelo yamaza. Ezi zihlenga zinyuka kwaye zehla zisebenzisa le ntshukumo ukuqhuba i-injini ehambisa umvelisi ngenkqubo yesanti.
Nangona kunjalo, zikhona izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga, njengenzuzo sifumanisa ukuba ifuthe lokusingqongileyo alikho, uninzi lwezixhobo zonxweme zinokufakwa kwizibuko okanye kwezinye izakhiwo ngaphandle kokutsho ukuba ngumthombo wamandla ahlaziyekayo.
Njengeengxaki; Amandla amaza awakwazi ukuqikelela ngokuchanekileyo, kuba amaza axhomekeke kwimeko yemozulu, kufakelo lwaselunxwemeni kunzima kakhulu ukuhambisa amandla aveliswe kwilizwekazi, njl.
Njengoko ubona, kulula ukwahlula-hlula ezi ndidi zimbini zamandla ziveliswa elwandle, nangona sinokuwasebenzisa amandla avela kumaza olwandle, ukuguqulwa kwamandla ashushu aselwandle kunye namandla avela kwi-saladi gradient, into engaphantsi kwesiqhelo kodwa namhlanje kufundelwa ukusebenzisa olwandle ngcono nokuzama ukuba kwixa elizayo izixeko zizonke zinakho ukuzimela ngezi ndidi zamandla ahlaziyekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amandla olwandle » Umahluko phakathi kwamandla ombane kunye namandla amaza
UJosep Ribes sitsho
AmaFrentshi aneziko lawo lokugula ngeemoto echwebeni loMlambo iRance kangangeminyaka engama-50, kwaye ngokungafaniyo noZapatero, babheja kuphando lwamandla, benamava, endaweni yokunika iibhiliyoni zezihlangu kumandla, uphando, kwaye ngaphandle kokuba nzuzo okwangoku. Ukuba sele sazi ukuba iya kuba nenzuzo kwikamva, siya kuthi silondoloze ngokufanelekileyo kubuchwephesha.
Phendula kuJosep Ribes
UDaniel Palomino sitsho
Andivumelani ngakumbi nawe Josep.
Imibuliso kunye nombulelo ngengcaciso yakho.
Phendula kuDaniel Palomino
UValladolid ucela ukusebenzisa ibhayisikile ngenxa yongcoliseko oluphezulu
ISpain kuya kufuneka ityale iimoto zombane ukuthobela i-EU